android ဖုန်းအဘို့အစာရှောင်ခြင်းအားသွင်းကိရိယာ APK ကို | APK ကို Android အတွက် Download
ပင်မစာမျက်နှာ » အားလုံး Apps ကပ » အစာရှောင်ခြင်းအားသွင်းကိရိယာ
အစာရှောင်ခြင်းအားသွင်းကိရိယာ APK ကို
အစာရှောင်ခြင်းဘက်ထရီအားသွင်းသင့်ရဲ့ device ကိုအပေါ်ပါဝါတွေစစ်ထုတ်ဖို့အတွက်ကြောင့် apps များနှင့်ချိန်ညှိချက်များကိုရှာဖွေမတွေ့ရှိသဖြင့် 50% ရန်သင့်ဘက်ထရီသက်တမ်းကိုတက်တိုးချဲ့ကူညီပေးသည်တဲ့အခမဲ့ဘက်ထရီချွေတာ App ဖြစ်ပါတယ်။
Professional က, သုံးစွဲဖို့လွယ်ကူပါတယ်, ဘက်ထရီချွေတာအသေးစိတ်ဘက်ထရီသတင်းအချက်အလက်များအားဖြင့်သင်တို့ကိုထောက်ပံ့ပေး, ငါတို့ထူးခြားတဲ့3အဆင့်ကျန်းမာသင့်ရဲ့ဘက်ထရီကိုစောင့်ရှောက်ရန်စနစ်အားသွင်းအသုံးပြုသည်။ , သင့် Android ဖုန်းကိုပိုရှည်သွားစောင့်ရှောက် အတှေ့အကွုံတိုးမြှင်ဟာမယုံကြည်နိုင်လောက်အောင်အာဏာကိုခံစားကြည့်ပါနှင့်နောက်တဖန်သင်၏ဖုန်းဘက်ထရီစိုးရိမ်ဘယ်တော့မှ!
က Ultra ဘက်ထရီအားသွင်းကိရိယာ၏အင်္ဂါရပ်များနှင့်အကျိုးကျေးဇူးများ:
- တဦးတည်းကိုထိပုတ်ပါနှင့်အတူတာဝန်များကိုဦးသေဆုံးရသောကြော်ငြာကို Save လုပ်ရန်ပါဝါအတိုကောက်!
- System ကိုအားသွင်းထူးခြားသော3အဆင့်!
- က Wi-Fi ကို / Data / Bluetooth ကိုပြောင်းသည်,
သင့်ရဲ့ဖုန်းကိုပါဝါကိုဖျန်ရဲ့အဘယ်အရာကိုထွက်ရှာပါ။ ပါဝါစားသုံးမှု settings ကို Adjust (ဥပမာရောင်ခြည်) နှင့်ဖုန်းကဘက်ထရီကိုဆင်းပြေးကြောင်းမလိုအပ်တဲ့ app များကိုပိတ်ထားပါ။ အစာရှောင်ခြင်းဘက်ထရီအားသွင်း app ကိုသင်ဘလူးတုသ်, GPS, Wi-Fi, မိုဘိုင်းဒေတာ, အမြင့် Screen ၏ Brightness ကို Screen ကိုအချိန်ကုန်, NFC အော်တို Sync ကိုစသည်တို့ကိုအပါအဝင်ဖုန်းကိုဘက်ထရီစားသုံးသမျှသောဝန်ဆောင်မှုများကိုစကင်ဖတ်စစ်ဆေးကူညီပေးသည်
★ စမတ်အကြို-set ကို Mode
အခြေအနေများအမျိုးမျိုးအောက်မှာဘယ်လောက်ရှည်လျားဖုန်းကိုဘက်ထရီကြာရှည်ဦးမည်ရှာဖွေတွေ့ရှိ (ဂိမ်းများ, Wi-Fi ကိုသို့မဟုတ်ပိတ်, စသည်တို့ကစားခြင်း)
သင့်ရဲ့ device ကိုထူးခြားတဲ့3အဆင့်သင့်ဘက်ထရီထဲကအများဆုံးရ, သင် overcharge ကြဘူးသေချာစေရန်စနစ်အားသွင်းစွဲချက်တင်ထားတဲ့အတွက်ထုံးစံထိန်းညှိ။
★ ပါဝါယိုစိမ့် detect
မဟုတ်အသုံးပြုမှုရှိနေစဉ်ပါဝါတွေစစ်ထုတ်ဖို့အတွက်သမျှသော apps များကိုစောင့်ကြည့်ခြင်းနှင့်မြင့်မားသောစားသုံးမှု apps များနှင့် ပတ်သက်. အသုံးပြုသူသတိပေးတယ်။ အားလုံးအပြေး-app များကို '' ပါဝါစားသုံးမှုကိုစောင့်ကြည့်ခြင်းနှင့် app ကိုမန်နေဂျာမှသင်အသေးစိတ်စာရင်းပြုစု, ဘက်ထရီ Monitor, ရှင်းရှင်းလင်းလင်းဘက်ထရီသက်တမ်းနှင့်အသုံးပြုမှု၏ status ကိုပြသ;
★ Optimization & ဘက်ထရီချွေတာ one-Click
အစာရှောင်ခြင်းဘက်ထရီအားသွင်းကိရိယာ app ကိုသင်တဦးတည်း screen ပေါ်မှာဘက်ထရီစားသုံးအားလုံးန်ဆောင်မှုကိုပိတ်ဖို့ကူညီပေးသည်။ သို့မဟုတ်သင်သင်သည်သင်၏ရွေးချယ်မှုအားဖြင့်ပိတ်ဖို့ရန်ဆန္ဒရှိသည့်ဝန်ဆောင်မှုများကိုရွေးချယ်နိုင်ပါသည်။ ဒါဟာနောက်ထပ်နောက်ထပ်စစ်ဆေးမှုများဘက်ထရီကျန်းမာရေးကိုဘက်ထရီကျန်းမာရေးရောဂါရှာဖွေရေးပါရှိသည်နှင့်ဘက်ထရီကျန်းမာရေးအဆင့်အတန်းကိုတွေ့စသည်တို့ကိုကောင်းသော, မကောင်းတဲ့, အအေး, ပူ, မြင့်မားသောဗို့ဖြစ်ပါသည်
★ခဏရှာပြီး fix ဘက်ထရီပါဝါစားသုံးမှုပြဿနာများနှင့်သင့်စွမ်းအင်ကိုချွေတာ-ညှိဒဏျကွေးဖို့အသေးစိတ် setting များကိုသော့ဖွင့်,
3.97 ကို MB
Onall Apps ကပ